nepalifilm Archives - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / nepalifilm
सौगातले लेखे गिनिज बुकमा नाम
Tags: alert-news, guinessbook, loveyoubaba, movies, nepalifilm, saugatbista, youngestdirector
खबरडेस्क १७ फागुन । चलचित्र ‘लभ यू बाबा’ का ८ वर्षीय निर्देशक सौगात विष्ट विश्वकै कान्छा निर्देशकका रूपमा स्थापित भएका छन् । सौगात सबैभन्दा कम उमेरका निर्देशकका रूपमा गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड््समा नाम लेखाउन सफल भएका हुन् । सौगातको… बाँकी अंश »
हेर्नु पर्ने १० नेपाली फिल्म
Tags: balidanfilm, basaifilm, basanteefilm, dakshinafilm, featured, filsofnepal, jholafilm, kusumerumalfilm, lahurefilm, moviesofnepal, munamudanfilm, nepalifilm, nepalimovies, numafungfilm, premoinda
खबरडेक्स, २९ कार्तिक । नेपाली फिल्मको इतिहासमा नै स्तरिय मानिएका १० नेपाली फिल्म भर्खरैको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने हो भने नेपाली फिल्म कोहिनुरले ९ करोडभन्दा बढीको ब्यापार ग¥यो । यस अघि फिल्म लुट र दर्पण छा“याले धेरै ब्यापार गर्ने फिल्मको रेकर्ड राखेका… बाँकी अंश »
Tags: alert-news, dharabasi, filmsnepal, jhola, jholafilm, nepalifilm
डा. प्रदीप भट्टर्राई नेपाली चलचित्रको पछिल्लो मानक हो,झोला । मस्तिष्कले हाइन, मनले बनाएको चलचित्र माघ २४ गतेदेखि प्रदर्शन भैरहेको छ । झोलाको बारेमा यसो भन्नु चलचित्र समीक्षकको राज्यको चौथो अंगको सदस्य हुनुको सामाजिक उत्तरदायित्व हो । यसो भन्नलाई न कुनै… बाँकी अंश »
६ एकान ६, किन चल्यो ?
Tags: 6ekan6, alert-news, chaekancha, chalchitra, deepashreeniraula, dhurmus, dipakrajgiri, featured, filmnepal, moviesofnepal, nepalifilm, nepalimovies, nitadhungana
सानो पर्दाका सेलिबे्टीहरूको क्रेज खवरडेस्क,२८ माघ । न्वारनदेखिको बल निकालेर प्रचार गरिएको ६ एकान ६ नामक फिल्मले राम्रो व्यापार गरेको छ । वितरकहरूका अनुसार यस फिल्मले अरू दुईवटा फिल्म बनाउन पुग्ने रकम निर्माताको गोजीमा राखिदिएको छ । धेरैपछि हास्य फिल्म… बाँकी अंश »
झोलाले सबैलाई रुवायो
Tags: alert-news, chalchitra, dharabasi, filmnepal, jhola, nepalifilm, nepalimovie, sidebar-featured
‘झोला’- सती प्रथा माघ २४ देखि प्रदर्शनमा
Tags: alert-news, featured, filmkhola, filmnepal, jhola, jholafilm, krishnadharabasi, nepalifilm, nepalimovie
काठमाडौँ, २२ माघ । नेपाली समाजमा विगतमा प्रचलनमा रहेको सती प्रथालाई आफ्नो कथावस्तु बनाएर निर्माण गरिएको ऐतिहासिक चलचित्र ‘झोला’ यही माघ २४ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यका र देशका विभिन्न जिल्लाका ३० वटा चलचित्र हलमा एकसाथ पर््रदर्शन हुने भएको छ । यस… बाँकी अंश »
Tags: alert-news, director, nepalifilm, shivaregmi
काठमाडाँै, २४ मङ्सिर । वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक शिव रेग्मीको आज निधन भएको छ । दुवै मिर्गाैलाले काम नगरेको अवस्थामा बल्खुको बयोधा अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएका रेग्मीको आज बिहान निधन भएको हो ।निर्देशक राजेन्द्र उप्रेतीका अनुसार अहिले बिहान ९ बजेसम्म अस्पताल… बाँकी अंश »